Zita Rekuvhura Iyo purojekiti yaive rwendo rwekutsvagisa nyaya dzeKutiza (dingindira ra1999) zvinyoronyoro uye zvisina kujairika, zvichiratidza shanduko, zvinhu zvitsva nemhedzisiro kubva pane izvo. Ese mavonero akachena uye akasununguka kutarisisa, achisiyana neyakagadzikana chokwadi kubva pachiitiko chekutiza. Dhizaini iri inogara ichichinja uye morphing maumbirwo anomiririra inomiririra chiitiko chekuverenga, kunokonzerwa neimwe mhando yemamiriro ezvinhu. Kutiza kune zvakasiyana, kududzira uye danho rekutarisa rinosiyana kubva pakutamba kuenda kune rakakomba.
Yemanyorero Mhete Dhizaini yacho inosanganisira simbi furemu umo mune iyo druzy inobatwa nenzira yekuti kune kusimbiswa kune ese ibwe pamwe nesimbi simbi chimiro. Chimiro chacho chakavhurika uye chinoita kuti ive nechokwadi chekuti ibwe ndiye nyeredzi yekugadzirwa. Chimiro chisina kujairika chedruzy nemabhora esimbi ayo anobata chimiro pamwe chete zvinounza kupfava kushoma kune dhizaini. Iro rakashinga, rakaoma uye rinogona kupfekwa.
Ice Cream Iyi Packaging yakagadzirirwa Sista Ice Cream Kambani. Boka rekugadzira rakaedza kushandisa matatu madzimai, ayo anoyeuchidza vagadziri veichi chigadzirwa, muchimiro chemafaro anofara anouya kubva mukuravira kwega kwega ice cream. Mukuravira kwega kwega kwekugadzira, chimiro pf iyo ice cream inoshandiswa senge bvudzi remunhu, iyo inopa mufananidzo unonakidza uye mutsva we ice cream kurongedza. Ichi chigadzirwa, muchimiro chayo chitsva, chakakwezva kutarisisa kwakawanda pakati pevanokwikwidza uye vanga vaine kutengesa kwakanyanya. Iyo dhizaini inoedza kugadzira yekutanga uye yekugadzira kupakata.
Bhodhoro Hwaro hwepfungwa yavo chinhu chinoshungurudza. Iyo yekuvandudza mazita uye yekugadzira dhizaini inotarisana nemanzwiro emutengi uye manzwiro avo, ivo vanobatsira chinangwa chekumisa munhu iyeye padyo pasherufu inodiwa nekuvaita kuti vatore kubva kuhuzhinji hwezvimwe zvigadzirwa. Pakeji yavo inoratidza mhedzisiro yehurongwa hwekuwedzeredza, iwo maratidziro ane mavara akadhinda zvakanangana pane chena porcelain bhodhoro rakafanana nechimiro chemaruva. Inotarisa inosimbisa iwo mufananidzo wechigadzirwa chaicho.
Chishanu 17 Chikumi 2022
Waini Inogona Magadzirirwo ewaini, inyika yekutanga uye guta rave rinotariswa zvikuru. Tsvaga mumidiki uye yependi yechinyakare. Iwo akakosha motifs akaziva kuti kuzadzisa chinangwa, izvi zvinoreva kuti nepo yechinyakare anodhakwa waini bhodhoro rewaini raive rakanyanya kushanda. Motif iyo yaishandiswa mukugadzirwa, arabesques.Izi motifs dzakatorwa kubva kuIran Varnished pendi. Iyo dhizaini inoedza kugadzira yekutanga uye yekugadzira magadzirirwo uye inoyedza kuti igadzire dhizaini ine zvinyatso kureva, uye kutakura meseji yakakosha.
Chitatu 15 Chikumi 2022
Ane Chigaro Chipiri 28 Chikumi
Fluid Cube and Snake Fenicha Yakachena Muvhuro 27 Chikumi
Bubble Forest Paruzhinji Zvifananidzo Svondo 26 Chikumi
Zita Rekuvhura Yemanyorero Mhete Kushambadzira Ice Cream Bhodhoro Waini Inogona